Maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe & Safiirka Mareykanka? - Awdinle Online
Maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe & Safiirka Mareykanka?
Madaxweynaha Maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hoyga uu ka dagan yahay Magaalada Muqdisho ku qaabilay danjiraha Dowlada Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto.
Madaxweynaha iyo Safiirka ayaa ka wada hadlay arimaha Doorashada iyo sidii Bulshada caalamku ay qeyb uga qaadan lahayd sidii Doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay ay dalka uga dhici lahayd.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa horay ula kulmay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo qaar kamid ah Xubnaha sare ee Midowga Muaharixiinta, waxaana kulamadaas intooda badan looga hadlay khilaafka kajira Arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa Muqdisho u yimid ka qeyb galka Shirka Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada, kaas oo la filayo in saacadaha soo socda in uu ka furmo Teendhada Afisooni ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleTaliye geeriyooday & Farmaajo oo ka hadlay
Next articleDowladaha Soomaaliya & Talyaaniga oo Heshiis kala saxiixday